Kedu ka m ga-esi mee ụkwụ m kwụsị ịrịa mgbu? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mgbu ụkwụ - otu esi ekpebi
Mgbu ụkwụ - otu esi ekpebi
Kedu ka m ga-esi mee ụkwụ m kwụsị ịrịa mgbu?
Zuo ike dị ka o kwere mee.
Tinye ice ruo 15 nkeji. Mee nke a ugboro 4 kwa ụbọchị, ọtụtụ oge maka ụbọchị ole na ole mbụ.
Jiri nwayọ gbatịa na ịhịa aka n'ahụ.
Were ọgwụ mgbu dị ka acetaminophen ma ọ bụ ibuprofen.
11 jul. Dec 2019
Ekele m unu, ọ bụ Dọkịta Jo, ma taa, m ga-egosi gị ụzọ m ise kachasị mma iji gbochie ike ọgwụgwụ ụkwụ, yabụ ka anyị bido. Dị ka sọks m? Aga m agwa gị gbasara ha ma emesịa. Bestzọ ise kachasị mma iji gbochie ike ọgwụgwụ ụkwụ nwere ike ịbụ ma ọ bụrụ na ị bilie ọtụtụ ụbọchị na ọrụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọsọ, ọ bụrụ na ị na-agagharị ọtụtụ, ndị a ga-abụ obere mgbatị, ụfọdụ ọgwụgwọ dị mfe, iji mee nke a ị na-adịghị ọbụna ga-ala.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-ejegharị n'ọtụtụ oge ma ịnweghị oge buru ibu ezumike, enwere ike ịme nke a n'ụzọ dị mfe. Yabụ nke mbụ ga - abụ agbatị mmiri. Quad dị ebe a ma ọ na - arụ ọrụ nke ukwuu ka ị na - agagharị ụbọchị niile ma mgbe akwara ndị a ga - agwụ ike, ha ga - ada mbà ma ụkwụ gị niile ga - ada mbà ma nwee ike gwụrụ. Otu ụzọ dị mfe iji jide n'aka na ị nwere nke ahụ oche na-eme ka itule gị n'ihi na ịchọrọ ilekwasị anya na ịgbatị ahụ.
Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ike ime mgbanwe dị nnọọ jidere gị ụkwụ n'azụ gị, ma ọ bụrụ na ị na-eme adịghị i nwere ike iji ya dị ka a oche n'azụ gị na dị nnọọ prop ya elu dị ka nke ọma, ma jidere na ụkwụ na isi ihe na ya bụ onye n'elu nke ụkwụ gị kwụ ọtọ. ya mere na ọ naghị agbatị ihe ahụ n'ihi na nke ahụ agaghị eme ka quad ahụ gbatịa. Wantchọrọ iweda ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatịkwuo ị nwere ike weghachite ya ntakịrị na nke ahụ ga - enyere aka ị nweta mgbatị gị.
Yabụ ebe ọ bụ na nke a bụ agbatị, ịchọrọ ijide ya maka 30 sekọnd, ma ọ bụrụ na ike gwụ gị ụkwụ ka ụbọchị na-aga n'ihu, ị nwere ike gbatịa n'akụkụ abụọ mgbe ị mechara 30 sekọnd. Ọ na-amasị m ịgbanye azụ na-aga nanị iji nye akụkụ nke ọzọ ntakịrị ezumike n'etiti, yabụ mee nke a ugboro atọ n'akụkụ ọ bụla iji mee ka quads ndị ahụ mara mma ma tọpụ. Ya mere mgbatị na-esote ga-adị n'ime maka ndị ntinye ahụ ọzọ ha na-ada ngwa ngwa ngwa ngwa, ọkachasị na-agba ọsọ na ihe ndị dị otú ahụ. ike na-agwụ ha.
Ya mere, ịgbatị bụ ụzọ dị ukwuu iji gbochie ike ọgwụgwụ a ma gbochie lactic acid iwulite. ọ bụ na lactic acid na-agbakọ ebe ahụ. Zọ ọzọ dị mfe ịgbatị ndị a na-enweghị ịda n'ala ma ọ bụ ịnọdụ ala ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ bụ ịgbasa ụkwụ gị ntakịrị karịa ubu gị.
Okwesighi ịdị oke anya, mana ị ga-ehulata otu ikpere wee gbagoo n'akụkụ. nke ga-agbatịa a n'akụkụ. ndị na-agbakwunye, ukwu, akwara apata ụkwụ.
Yabụ nke a ga-abụ agbatị nke iri atọ na abụọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ijide, ị nwere ike ịme ya ọzọ, ị nwere ike ịgakwuru ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ma mgbe ị gbatịchara n'akụkụ ahụ, ị ​​ga-alọghachite ma gbatịa ụzọ ọzọ. ka ị na-akwụ ọtọ karịa ị nwere ike ịka nka karịa maka na ị na-emezi ihe kwụ ọtọ na-enye aka na ịme obere mgbatị na mgbatị hip, nke ịchọrọ ịgbatị kwa.
Yabụ ọ bụrụ na ị bịa ma gbanye úkwù gị ka ị na-agbatị, ị ga-enwetakwa ndị ntinye gị na mgbatị gị, mana ọ bụrụ na ịchọghị ịgbatị akụkụ ahụ, ị ​​ga-ehulata ntakịrị, mana ọ masịrị m ịnwe njikọ ahụ ọ dị ezigbo mma. Greatzọ ọzọ dị mma iji gbochie ike ọgwụgwụ ụkwụ bụ mkpakọ sọks na ndị folks na Socks Lane zitere m mkpakọ ngwaahịa ha na dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, ndị a bụ ikpere ikpere. M hụrụ n'anya mkpakọ sọks karịsịa mgbe na-agba ọsọ.
M na-agba ọsọ na-enweghị mkpakọ sọks ma ọ fọrọ nke nta ka m nwee ike ịnweta nsị, ana m enweta plantar fasciitis, ụkwụ m na-enwe ike gwụrụ ike, na ihe mkpakọ sọks na-eme bụ na ha na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ ahụ n'ihi na ha na-enyere mọzụlụ ndị ahụ aka Mee ka ọbara gbasaa . Yabụ ọ bụrụ na ị biliri ụbọchị niile, ụkwụ gị amalite wee dị ntakịrị, mgbe ụfọdụ ndị mmadụ nwere ọmarịcha ụkwụ ha ma ị nwere ike pịa ya ma ọ ga - abụ obere mkpịsị aka aka na ọ pụtara na ọbara a bụ naanị ma ọ bụrụ na ị ga - aga ala, ike ndọda na-eso ma ị nwere ezigbo oge ịlaghachi na sistemụ gị. socompression sọks na-enye mkpakọ a.
Ana m akpọ ya ntakịrị mmakọ. Enwere nrụgide dị iche iche, ụfọdụ bụ ezigbo ọkụ, nke ahụ bụ 15 ruo 20, mana ha na-aga 30 40 na na. N'ihi ya, m n'ezie na-amasị mkpakọ sọks. ha dị ukwuu iji. ọzọ, ha dị mma iji mgbe ị na-agba ọsọ.
Ha dị mma iji ma ọ bụrụ na ihe niile ị ga - eme bụ iguzo n'ụkwụ gị ụbọchị niile. Ọ bụrụ na ị dị ime ma nwee ụkwụ ndị fụrụ akpụ, ndị a dịkwa mma maka nke a. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụ ahịa maka sọks Lane mkpakọ sọks na aghụghọ ọchị ma ọ bụ naanị agba dị larịị, pịa njikọ dị n'elu.
Ọgwụgwọ nke anọ ga-abụ agbatị apata ụkwụ. Na hamstring erute, ị chọrọ ịkwado ikiri ụkwụ gị otu ahụ. Zọ a, mee ka úkwù gị gaa ihu ma mee ka azụ gị kwụ ọtọ.
Ya mere ana m eme ya ka ị nwee ike ịhụ ya, mana ị chọghị ịgbada azụ gị ma gbalịa imetụ mkpịsị ụkwụ gị aka n'ihi na mgbe ahụ ị gaghị enwe ezigbo mgbatị na eriri ụkwụ gị. Gbalịa idobe azụ gị na ịgbago ihu n'úkwù. N'ihi ya, m na-agbatị ebe a karịa mgbe m na-agbada azụ m ma gbalịa imetụ mkpịsị ụkwụ m aka.
Yabụ na ị gaghị emetụ mkpịsị ụkwụ gị aka, mana ọzọ, nke a bụ agbatị ebe ịchọrọ ijide ya maka 30 sekọnd wee mee ya ugboro atọ n'akụkụ ọ bụla. Ya mere tinye ya n’ihu gị ma mee ya otu ahụ. Ọ bụrụ na nke a adịchaghị mma ma ọ bụ na ịnweghị nguzozi gị, ịnwekwara ịnwe oche oche nke ị na-akwadokwa n'oche ahụ wee gbatịa n'ihu. ndị dị ka nke a ntakịrị oge ka mma, yabụ na ọ dịịrị gị. na mgbe ikpeazụ ịgbatị na m ga-eje ije na nzọụkwụ. ihe ikpeazu diri umu ehi gi na ukwu.
Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ iji otu nzọ ụkwụ ma ọ bụ nkwụsị nke ị ga - azọ ụkwụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu iji jide n'aka na ị nwere ihe kwụsiri ike ijide, ma ọ bụ ụfọdụ okporo ígwè ma ọ bụrụ na ị nwere nzọụkwụ, mana ị ga-abanye nzọụkwụ ahụ ma tinye bọọlụ ụkwụ gị n'akụkụ ugwu ebe a. Mgbe ahụ hapụ ikiri ụkwụ gị, nke a ga-agbatị mpaghara nwa ehi gị. ọ ga-enyocha ala ụkwụ gị ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na mpaghara ahụ, ọ ga - enyere aka ịgbatị ya ma mee ka ọ dị mma.
Ya mere, jide ya ala maka 30 sekọnd wee gbanwee n'akụkụ. Mgbe ị na-enwe mmetụta zuru oke na ị nwere akpụkpọ ụkwụ, ị nwere ike ịme ma n'otu oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana kpachara anya ka ị ghara ịpụ na ọkwa a. Ya mere, ọ bụrụ na ọ dị gị ntakịrị ejighị n'aka, ị nwere ike ịme otu n'otu oge, mana ọ bụrụ na ị na-enwe ọmarịcha mma ị nwere ike gbatịa ha abụọ n'otu oge. ya mere sekọnd iri atọ, ugboro atọ.
Ndị a bụ ụzọ ise kachasị elu iji gbochie ike ọgwụgwụ ụkwụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ Socks Lane Compression Socks pịa ebe a n'elu ma echefula ịdenye aha site na ịpị ebe a n'okpuru. ma cheta, dị njikere, nwee anụrị ma nwee olile anya na ị ga-aka mma n’oge adịghị anya.
Gịnị mere m ji enwe ihe mgbu na ụkwụ m?
Mgbu akwara, tendonitis, na akwa ụkwụ
A na-enwekarị mmerụ ahụ akwara, dị ka ihe mgbu akwara mgbe eriri akwara adọwara, bụ ihe na-akpatakarịụkwụ mgbu. Mkpụrụ ahụ dị naụkwụọtụtụ ndị na-emetụta bụ quadriceps, hamstrings na ụmụ ehi. Ọrịa egwuregwu na-abụkarị ihe na-akpata mmerụ ahụ ike.Bọchị 10 2020
Yipee ki yay. Abụ m Bob Schrupp Physiotherapist, Brad Heineck Physiotherapist Ọnụ anyị bụ ndị physiotherapists a ma ama na ịntanetị, yabụ na echiche anyị n'ezie Bob. Ya mere, taa anyị ga-ekwu maka mgbu nwa ehi.
I kwesịrị ịmata nke a ma ọ bụrụ na ị nwere nwa ehi mgbu ọ bụ a wetara akwara? Ọ bụ clot ma ọ bụ ka anyị nwere ihe ọzọ nwere ike ịbụ ọrịa ọrịa mpaghara. Anyị ga-agabiga ụfọdụ ihe ịrịba ama nwere ike isi na nke ọ bụla pụta ma nwee olile anya inyere gị aka ịmata, mana oge ụfọdụ ịnwere ike ịgakwuru dọkịta ka ị chọpụta. Eeh, I kwesiri ịhụ onye ọkachasị, ọkachasị na mkpụkọ ọbara, mana anyị ga-agafe ihe ole na ole ị ga-achọ na otu esi achọ ha.
Ya mere, anyị na-amalite site na ịdọpụ akwara, mana tupu Bob, a ga m asị na ị ga-abanye nke gị, ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, biko were nkeji nke abụọ ịdenye aha. Anyị na-enye edemede banyere otu ị ga - esi mee ka enweghi mgbu na - enweghị ihe mgbu ma bulite ha kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, gaa Facebook dị ka anyị n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme anyị ga-enye gị jụụ vibes. Na m na-ekwu, anyị gbasara ọnọdụ. Ee, dumb na dumber, nwa, dobe ọnọdụ ahụ Ee, nke a bụ ihe nkiri ochie, ị maara, ọ dị ihe dịka afọ 15, ndị okenye maara.
O nwere ike ịbụ ndị na-eto eto na-amaghị, nri. Nke ahụ bụ ihe m na-ekwu, ndị okenye ga-eme ya n'ụzọ ọ bụla, anyị abụghị ndị nzuzu na ndị nzuzu. Anyị anaghị eche n'ihu Bob.
You ga-aga n’ihu, ọ bụ ihe ngosi gị, Ọ dị mma, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu nwa ehi mgbe mgbe, ihe na-akpatakarị, ma eleghị anya ihe kpatara ya, bụ ahụ ike, nsogbu ma ọ bụ obere akwa, nri, na ọrụ a na-abụkarị naanị ịmara ihe merenụ Ikekwe ị na-egwu bọọlụ bọọlụ na ị na-agba ọsọ site na mbụ wee nwee mmetụta na mgbu ahụ dị egwu. Ga-awụli ụdọ, ikekwe gbaa ọsọ dị anya, ndị egwuregwu tenis na-adịkarị. O doro anya na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnwe akwara ma ị maghị ebe o si abịa.
Ma, ị maara, ọ nwere ike ịbụ onye na-eme ihe ike n'elu akwa mgbago ma ọ bụrụ na i cheghị echiche banyere ya, ọ dabara n'ime gị. Yabụ otu ụzọ ebe ahụ bụ, aga m egosi ụkwụ m taa, Bob. Ọ dị mma, ga n'ihu.
Ọnọdụ ahụ na-abụkarị afọ anụ ahụ, ọ bụ ezie na ị ga-ama ma ọ bụ akwara. Ọ nwere ike ịdị ala ebe a ma ọ bụ na akaị n'onwe ya. Mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe tendinitis, nri.
Yabụ na nke ahụ dịtụ iche, mana ọ bụ n'ụzọ ziri ezi n'etiti etiti ebe a, nke ahụ bụ ebe afọ bụ ntopute a ebe naanị akwara naanị ebe a na-adịkarị n'akụkụ oke a, oge ụfọdụ ọ na-adịtụ ntakịrị ntakịrị, ọ na-adịkarị nro mgbe ị na-afanyekwa mọzụlụ mgbe ịchọtara ntụpọ ọ na-afụ ụfụ, ọ nwere ike ibu ibu ụzọ n'ụzọ anọ, ọ dị ka oh enwere ebe a na-ahụkarị nke ọma mgbe ị na-agbatị ya ma ọ bụ dorsiflex mgbe niile, nke a nwere ike iwe iwe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eje ije ntakịrị ntakịrị. You mara n'ezie na amaara m na ị ga-ekwupụta ụfọdụ ọgwụgwọ, mana otu n'ime ọgwụgwọ a na-eyikwa obere ịkpụ ụkwụ n'ikiri ụkwụ nwa oge, n'ezie, nke ahụ na-ewepụkwa nsogbu ahụ. Ya mere, were dị ka ọkara inch inch heel wedge, tinye ya n'ime akpụkpọ ụkwụ gị nke ị nwetara na Dr.
Scholls ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, ị ​​ga-ejide ha n'ụlọ ahịa, ọ ga-ewepụ ụfọdụ mgbakasị ahụ nwa ehi ahụ ka ọ na-agwọ, maọbụ ọ bụrụ na ị mee, ị ga-etinye otu n'okpuru ụkwụ nke ọ bụla, ma ọ bụghị na ị ga-enwe otu muchkwụ dị mkpụmkpụ karịa ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ị mee Ọ bụrụ na ị na-eme nke ahụ kwa, ị kwesịrị ịchọpụta na ọ na-adị mma karịa ozugbo ọ bụ ihe dị mkpụmkpụ. Gaghị eyi ihe ndị a n'ụkwụ gị n'ihi na ịchọghị ka ikiri ụkwụ kwụsie ike na ọgwụgwọ ndị ọzọ maka akwara akwara will ga-eji ngwugwu oyi na mbido mgbe ha dị nro ma nwee ọnya, n'ozuzu 24 ruo 48 awa. Can nwere ike ịme mgbatị dị nwayọọ, ị maara, ị na-emerụ ya ahụ.
Chọghị iji ike gbatịa ya ma merụọ ya ahụ ọzọ. Yabụ na enwere ike iji nwayọ nwayọ wee gbatịa iji bido, ibuprofen ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe mgbochi mgbochi mkpali na mgbe ahụ ịmara na mgbe ọ malitere ịgwọ ị nwere ike ịbanye na ọrụ anụ ahụ dị nro, ma ọ bụ ntụgharị esemokwu mkpokọta ma ọ bụ igwe elekere isii nke ị nọ na-arụ ọrụ na ya, anyị enweghị oge iji banye ọgwụgwọ ndị a. Anyị nwere edemede dum gbasara nke a.
Ya mere, mgbe ị pịnyere Bob na Brad ma pịnye na nhụjuanya nwa ehi m na-ekwu na ọ na-egosi ma echere m na anyị nwere ihe karịrị otu isiokwu. Echere m na anyị na-eme. Ee, mana otu ndị ahụ.
Ee gaa n'ihu Dịka nsogbu nwa ehi n'ime gị na-agwọ, izu abụọ ị nwere ike mara nke ọma, ọ nwere ike ịbụ izu isii dabere na otu ị si eme ihe ike, ọ bụrụ na ị maara pụọ ​​ma gbapụ ma ọ bụ mee ihe na-akpasu ya iwe, ha na-emeghachi omume nke ọma na m na-ekwu, na izu abụọ nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ mmerụ ọhụrụ ma ị na-eme eriri eriri ozugbo, izu isii ọzọ nwere ike ịbụ karịa maka nsogbu na-adịghị ala ala. N'ezie.
Yabụ ee, mana ọ gha agwọ. Echere m oh ee Ee, ihe ọzọ anyị ga-aga ugbu a bụ ọrịa ogige. Nke a bụ obere ihe omume, nri.
Mana ị mara, ọ dịghị amasị ya ka ọ naghị eme. Aka nri, aka nri, ọ dị ebe ahụ ịmara na ị nwere ike google ya wee lelee ya anya, agwara m podiatrist na-arụ ọrụ ya ma ọ rụọ ọrụ na ya n'izu gara aga wee nwee ohere ịgwa ya okwu banyere ya, mana gị nwee ụlọ anọ n'ime nwa ehi gị, ụlọ ọ bụla nwere akwara dị na ya ma mgbe ị na-emega ahụ, ime ụlọ ndị a na-amalite juputa n'ọbara n'ihi na akwara chọrọ ọbara. Ma ọbara anaghị asọ dị ka o kwesịrị na ọrịa ventricular.
Ọ na - apụtakarị na ọ dị mma, yabụ ọbara na - eme n'ihi na ị na - emegharị ahụ, ọbara anaghị asọba maka ụfọdụ ihe kpatara ya, ogige ahụ wee jupụta ma ga - enwe oke nrụgide, oke mmiri lactic ebe ahụ, ihe mgbu na - amalite na mgbaàmà ndị a na - ahụkarị. bụ mgbe ị na-eme Ọ bụrụ na ịmalite ọrụ na obere oge, ị ga-enweta ezigbo mgbu mgbu, mana mgbe ị kwụsịrị Nrụgide ahụ na-ada ma ọ na-adịkwu mma You na-eme ihe omume gị ọzọ Mgbu mgbu na-akwụsị Ọ bụrụ na ọ dị njọ You ga-ahụ ọzịza , ị nwere ike na-eche mkpọtụ, nke ahụ na-agbanye ụkwụ gị n'ihi na akwara na ọbara adịghị mma, n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Yabụ ọ bụrụ n'inweta ụdị mgbaàmà ndị a, ihe mgbaàmà na-ahụ maka akwara ozi, mgbe ahụ ị ga-abanye. Echere m na ị ga-ahụ nke a na ndị ọgba ọsọ ọtụtụ.
Echere m, ị nwere ike ịhụ nwoke a dị ka ndị na-agba ọsọ ma ọ bụ biker n'ihi na ị na-eji nwa ehi ahụ nke ukwuu. O doro anya na ịmara mgbe m gbara ọsọ mgbe m dị obere, enwere m ntakịrị nsogbu. Ee, echekwara m na ọ bụ naanị ụdị nrịanrịa nke akụkụ.
Oge ọzọ ị ga-enweta ọrịa ụlọ mgbe ọnyá gasịrị. Ọ bụrụ na ụkwụ gbajiri agbaji, ma ọ bụ ọrịa ọnya ebe agbajiri ụkwụ nwere ike iwe iwe na ịkpalite ọgba aghara ọbara nke nwere ike ibute ọrịa ọgbụgba, yabụ ihe mejupụtara akụkụ ahụ bụ fascia na akwara dị na fascia ọ fọrọ nke nta ka ha mepụta ụdị tube ọzọ n'akụkụ akwara na ọzọ ha nwere ike ịgbasa nke ukwuu, ya mere akwara na-agbasa site na ọbara. Ọ na-etinye ọbara na irighiri akwara n'ihe ize ndụ.
Fascia a siri ike, ọ bụghị dịka ọgwụgwọ, ọkachasị mgbe ọ dị oke njọ, ọ dị mfe ịwa ahụ Podiatrist Maggie kwuru na ọ dị mfe, ozugbo ha kwadochara ihe niile, ọ ga - ewe nkeji iri na ise. Go banye na e nwere ịkpụ. Open mepee ogige ahụ, nyefee mbipụta.
Ọ ghaghị ịgwọ ma nke ahụ bụ anụ ahụ dị nro. Agaghị m akwado ịme ya n'onwe gị. Ewerela obere mma anụ, nke ọma, m ga-ekwu nke ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mfe, enwere ike anyị ga-eme ya, ee, mana ọ nwere ike ọ sịghị.
Ee ee, na emesịa ọtụtụ nke ikpeazụ, ma eleghị anya ọ kachasị njọ, na ikekwe nke abụọ kachasị, m ga-asị nri? N'ezie. Ee, ihe m na-ekwu bụ na ahụla m okwu ise a, ma ihe anyị na-ekwu bụ DVT, ma ọ bụ eriri ọbara, usoro nkwonkwo akwara miri emi, nke ọma onye nkịtị na-akpọ ya eriri ọbara, nke ahụ nwekwara ike mee ebe a, ọ dị ntakịrị ikpere karịa ka ị ga - ahụ mkpụkọ mkpụmkpụ n'akụkụ ahụ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla, mana nke a bụ ebe a na - ahụkarị maka ha ichegbu onwe gị bụ na eriri nwere ike ịgbaji ma banye n'ime akpa ume gị.
M pụtara afọ ndị gara aga na e nwere onye nta akụkọ. Cheta, anyị tụlere nke a na mbụ, ọ bụ n'oge agha Iraq. Oh Oh Mhm, egburu ya n'ezie ịnyagharị na tankị ruo ogologo oge.
Mgbe ahụ ọ naghị arụ ọrụ ma ọ rụpụtara eriri ọbara wee gbagote n'akpa ume ya gbuo ya. Ruo ugbu a ọ bụ ihe kpatara ya na ihe kpatara ya ji nweta ọbara ọgbụgba site na ịnọdụ ala ruo ogologo oge Correct, ọ bụ ya mere na ị maara nchegbu na-echebara ụgbọ elu Ọ bụ ya mere anyị ji agwa gị mgbe ị nọ n'ụgbọelu iji jee ije na nfuli ụkwụ ụkwụ kwa n'ihi na ị 'm nọ ọdụ Ma echere m na o nwere ihe jikọrọ ya na nrụgide ikuku, ọ bụghị n'ụgbọelu know maara na ejighi m n'aka, mana maka ihe dị mfe, ịkwaga, mee ka akwara ndị ahụ gaa, mee ka akwara ndị ahụ gaa nwere oke ọzịza n'ụkwụ gị n'ihi ihe ụfọdụ, na-echegbu onwe gị ntakịrị ma ọ bụrụ na ị nọ ọdụ na mberede na n'ihi ihe ụfọdụ ma eleghị anya n'ihi mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, mgbe ahụ ị nwere ike ịnọkwu n'ihe ize ndụ. Nọmalị na ị na-arụsi ọrụ ike, aka nri, ị gbajiri ụkwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ị na-anọdụ ala ruo ụbọchị ole na ole n'ihi mmerụ ahụ mana na-eche nke a iji gwọọ ọ na-abụkarị nchegbu gbasara mgbaàmà na nke ahụ bụ ihe m na-eme, ị maara na ụlọọgwụ, ị maara na m ga-agbanye, aga m aga maka ịdị nro dị nro mgbe ị pịtara mpaghara nke nwere eriri miri emi ọ mara mma, ee, ọ dị, anyị wee mee ka nkwonkwo ụkwụ anyị kwụrụ ọtọ.
Enwere ule a na-akpọ Homan Sign. Anyị agaghị agafe ya n'ụzọ zuru ezu, mana ị na-emetụ aka, ị gbatịa ahụ ahụ, lelee ọnọdụ okpomọkụ na ihe ọ bụrụ na ọ dị mma na ụlọọgwụ. Ee, na okwu ndị ọzọ, 50% nke oge ọ nwere ike ịbụ akara ngosi Homan dị mma nke na-ekwu, oh, ọ dị ka thrombosis miri emi, ma ị bulie ya wee mee nnwale nyocha nke bụ ultrasound nke nọ n'ụlọ ọgwụ emere ka obu ebee inweta ya? ultrasound na nke ahụ ga-agwa gị n'ezie.
Ya mere, anaghị m atụ aro ka ị chọpụta onwe gị na ọrịa syndrome ma ọ bụ mkpụkọ ọbara. Chọrọ ọkachamara iji mee nke a. Ee nke a bụ ahụmịhe m.
Eleghi anya enwere m mmadụ 10 ka m lelee ma ọ bụrụ na ha nwere ọbara ọgbụgba ma ọ bụ na ọ dị ma mmadụ ise ma ọ bụ isii mere. Ya mere, ọ na-aga na-amụ na ihe 50% ziri ezi. Are na-ahụ m n'anya mgbe niile ị maara na anyị na-eburu ọtụtụ ihe n'uche, ọ dị mma, ọ bụ ya mere na ọ bụ ihe ọ ga-arụ ọrụ ụbọchị, ụbọchị, afọ, afọ iji nweta ezigbo obi maka ọrịa ọrịa na ihe mgbochi ọbara ma ọ bụ DVT ya mere enwere m olileanya na nke a ga - enyere gị aka ịghọta ntakịrị ihe mgbu nwa ehi na ụfọdụ ihe kpatara ya, ị ga - amata ihe ị ga - eme banyere ya.
Ee, lelee isiokwu anyị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na nsogbu nwa ehi a wee kelee onye ọ bụla maka ikiri.
Kedu mgbe m kwesịrị ichegbu onwe m banyere mgbu ụkwụ?
Kpọọ maka enyemaka ahụike ozugbo ma ọ bụ gaa na ụlọ mberede ma ọ bụrụ na ị: Nwee aụkwụmmerụ ahụ nwere oke miri emi ma ọ bụ ọkpụkpụ ekpughere ma ọ bụ akaị. Enweghị ike ịga ije ma ọ bụ tinye ibu na gịụkwụ. Nweremgbu, ọzịza, acha ọbara ọbara ma ọ bụ obi ụtọ nwa ehi gị.
Ekele m unu, ọ bụ Dọkịta Jo, ma taa m ga-egosi gị ụzọ ise kacha mma iji belata mgbu na ọzịza n'ụkwụ gị. Ya mere ka anyi bido. Yabụ tupu anyị ebido, ọ bụrụ na ịnenyeghị aha, gbaa mbọ kụrụ bọtịnụ dị n'okpuru. na sọks ị na-amasị gị? Aga m ekwu maka ha ma emesịa.
Ihe mbụ nke na - enyere aka belata mgbu na ọzịza na ụkwụ, ikpere, na hips na - ebuli ụkwụ n'ozuzu. Yabụ ịchọrọ ịgbakwunye akụkụ fụrụ akpụ. Na n'ị bulie ya elu, ị bụghị naanị ịkwado ya, ị chọrọ ya karịa obi gị.
Ya mere, ọ bụrụ na ị wulie ihe ọ bụla, dinara ala. Yabụ ọ bụrụ na ọ bụ ikpere m ma ọ bụ nkwonkwo ụkwụ m ma ọ bụ naanị ụkwụ m na-aza aza ugbu a, ọ karịrị obi m ugbu a. Ya mere mmụba a na - enyere mmiri aka ịlaghachi na sistemụ m ma mepụta ya n'ihi na mgbe anyị nwere ọzịza a n'ụkwụ anyị na - amụ anya ma ọ bụ na - agagharị ụbọchị niile. ma ọ bụ anyị ọbụna ịnọdụ ala na ọzịza a na-esote ike ndọda ma gbadata n'ụkwụ n'ihi na ọ maghị ebe ọzọ ị ga-aga. ọ na - agbadata ike ndọda wee gbadata, na nsogbu nke ahụ bụ mgbe ụkwụ ahụ na - aza nke ukwuu, nke nwekwara ike na - egbu mgbu ma na - ebute nsogbu mgbasa ọbara.
N'ihi ya, ịnweta ọzịza a n'ụkwụ gị dị ezigbo mkpa ma na-ebuli ya bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe. ịkwesighi ime ihe ọ bụla karịa ịgha ụgha ebe ahụ ma kwado ya, mana ọzọ hụ na edobere ya n'obi gị. Yabụ ọ bụrụ n 'ịnọdụ ala n'oche nwere naanị ụkwụ gị kwenyere, enwere m ike inyere obere aka, mana ọ gaghị aba uru dị ka iji ụkwụ ahụ dina ala n'obi gị. mfe ime right? Nke abuo na aru mmiri, oyi di ezigbo nkpa na ihe mgbu na ọzịza, amam na enwere otutu nyocha n’ebe ahu na ufodu ndi mmadu na-ekwu, ajula oyi, ichoro ka otutu ahu puta.
Ọfọn, mmerụ ahụ na-enweghị isi, mgbe ụfọdụ ịchọrọ ịba ma ọ bụ mbufụt n'ihi na ọ na-enyere usoro ọgwụgwọ ahụ aka, mana nsogbu bụ ma ọ bụrụ na ị nwere oke mbufụt na nọ naanị ebe ahụ ị ga-enweta ọtụtụ ọnya na ị ga - enweta ọtụtụ adhesions nke ahụ bụ ọnya. Ya mere, nke a na-aghọ nnukwu nsogbu, yabụ icing dị mkpa. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnwe ka ndị mmadụ na-agwa gị ma ọ bụghị, mana a na m agwa gị na ekwenyesiri m ike na ị ga-adị n'igwe.
Mgbe mgbe, icing jikọtara ya na elevation dị ezigbo mma, ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ bụ ikpere m, ọ bụrụ na ọ bụ nkwonkwo ụkwụ m, m ga-aga n'ihu ma tinye ice n'elu ya, gbaa mbọ hụ na ị gaghị eme ya karịa oge 10 ma ọ bụ 15. , ma kwusi ya n’ebe ahu. Etinyela ice n’elu nri gị, gbaa mbọ hụ n’onwere akwa ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ihe mkpuchi ndị a dị mma n'ihi na ha nwere ihe ọ bụla na ha, ma mesịa dinara ala, tinye ice cream gị ebe isi mmiri dị, ma zuru ike wee hapụ nkeji 10-15 ndị ​​ahụ gafere.
Agala ogologo oge karịa nke ahụ mgbe ọ bụ ezigbo ice kama ị dị ka otu igwe igwe ndị ahụ na-awụsa mmiri oyi n'ihi na ozugbo ị jiri ice rụọ ọrụ karịa oge 10 ruo 15, ahụ gị ga-abanye n'ọnọdụ nchedo n'ihi na ọ na-eche ya Other na-abanye hypothermia ebe ahụ. n'ezie ọ na-amalite rewarm ebe ahụ ka i wee gbochie isi. Yabụ ọ bụrụ na itinye ice n’elu ihe dị ka nkeji iri atọ, ọ ga-efunahụ gị isi mee ice.
Ya mere a kacha nke 10 na 15 nkeji. I nwere ike ime nke a ugboro atọ rue anọ n’ụbọchị ma ọ bụrụ na inwere oge. Kwesighi ime ya elu, mana echere m na iji ogo dị elu mee ya dị ezigbo mkpa.
Ya mere nke atọ bụ iyi mkpakọ sọks ma ọ bụ sọks, akpa, tights na ihe ndị yiri ha. Ndị mmadụ na Jomi Compression zitere m mkpakọ ngwaahịa ha ma zitere m ụyọkọ ha n'ihi na ha nwere ụyọkọ ha, agba dị iche iche, nha dị iche iche, ndị a bụ sọks ịwa ahụ na-apụ apụ. na ihe mere ha ịwa ahụ bụ na-enwekarị mkpakọ.
Ọ bụrụ na ị lelee mkpakọ ngwaahịa, mgbe ị nwetara ụfọdụ n'ịntanetị, ị nwere ike ịhụ 15 ka 20, 20 ka 30, 30 ruo 40, nke bụ mmhg, nke bụ milimita nke Mercury na nke ahụ pụtara oke nrụgide ma ọ bụ mkpakọ? ọ na-abanye ebe ahụ. Mgbe ị hụrụ sọks na-agba ọsọ sọks dị ka owu na sọks ụmụ nwanyị ha nwere ebe a, nke a na-abụkarị 15-20, yabụ na ọ dị mma na ọ naghị enye gị mkpakọ nzuzu, mana ọ nwere ike bụrụ na ụkwụ gị zaa mgbe emechara ahụ ma ọ bụ ntakịrị ije nke na-enyere aka ịpụ ebe ahụ. Ndị na-awa ahụ m nwere ugbu a bụ 30 ruo 40 nke mere na ọtụtụ mkpakọ karịa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere m ịwa ahụ, achọrọ m obere mkpakọ n'ihi na enweghị m ike ịmegharị ihe ahụ na nke ahụ ga - enyere aka ịhazi ya. Nke ahụ dịkwa oke mma, ọ masịrị m nke ahụ nke ukwuu. Ọzọkwa, ihe dị mma maka ihe ha bụ na ha nwere apata ụkwụ.
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ịwa ahụ ikpere ma ọ bụ ọbụna ịwa ahụ hip, ị nwere ike ịchọrọ mkpakọ a ntakịrị elu. Dị ka ị pụrụ ịhụ ndị a toro ogologo na ihe dị mma banyere ha bụ na ha nwere ntakịrị silicone ebe a ka ọ ghara ịlaghachi azụ n'ihi na ahụla m ọtụtụ ndị ọrịa na-abịa ma ha maara naanị otu ọnya wee pụọ. gbadaa ikpere wee nwee ụdị igbochi ebe ị ga - enweta ya ka ọ dị mma ọfụma na ị nwere ike ịhụ ebe ahụ, na ọ na - enye gị ọnụnọ mara mma, na ọ gaghị ada ada. Ha nwekwara ihe ndị a niile na oji, ọcha na agba aja na yabụ ebe ị nwere ike ịhụ na nke a bụ ụdị pantyhose nke na-aga n'elu.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ihe dị n'úkwù gị - ma ọ bụ ụkwụ gị dum, ọ bụrụ na ị tinye mkpakọ ahụ ruo n'úkwù gị na pantyhose gị, mgbe ahụ ị ga-enweta ọtụtụ n'ime ya site na ịpị ịzịza ahụ na ahụ gị. ya mere ha dịkwa oke mma, ee ee, ụmụ nwoke nwekwara ike iyi uwe. ma ha bụ otu n’ime ihe ndị ọzọ dị jụụ ha nwere nke ị nwere ike ị nweta na mkpịsị ụkwụ gị.
Ya mere, akụkụ a ga-emeghe ma ọtụtụ mmadụ jụrụ gịnị kpatara m ga-eji chọọ ka mkpịsị ụkwụ m kpuchie. ma e nwere ọtụtụ ihe kpatara nke a, mana nke bụ isi bụ idebe ikuku ebe ahụ. Fọdụ ndị nwere ike ịnwe nsogbu akpụkpọ ahụ, dị ka dermatitis ma ọ bụ ihe yiri nke a, ọ bụrụ na ị mechie ya oge niile ọ ga-akawanye njọ na akpụkpọ gị ya oge ụfọdụ ndị nwere obere oghere dị na ala naanị na-enyere ntakịrị ikuku ikuku aka na, ma ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu akpụkpọ ọ bụla, m ga - asị nweta nke mechiri emechi n'ihi na nke ahụ na - eme ka ọ dị mfe ma ọ bụ mkpakọ gburugburu.
Mana ha nwere otutu nhọrọ ị nwere ike nwalee ha. Mma mma enye etieti. Ọ dị ya ezigbo mma, ọ dị m ka ịmakụ m na mgbe m na-agba ụkwụ m na-aza nke ukwuu mgbe m na-agba ọsọ ma ọ bụ n'ụkwụ m ụbọchị niile ma ana m etinye sọks mkpakọ mgbe m were ha ab enweghị m ọzịza na njedebe nke ụbọchị. ya mere ha na-arụ ọrụ ma ha bara uru.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ otu n'ime ndị a nwere ọtụtụ nhọrọ, gbaa mbọ wee pịa njikọ dị n'elu. Yabụ ugbu a anyị ga-eme ụfọdụ mmega ahụ iji nyere aka na mgbu na ọzịza ahụ. na ndị na-dị nnọọ mfe ihe na-eme. ị nwere ike ịme ọtụtụ n'ime ha ebe ọ bụla.
Ya mere, nọmba anọ bụ nfuli nkwonkwo ụkwụ. Ya mere, ọ na-alaghachi n'ụzọ kachasị mma m hụrụ n'anya ịme mgbe ị na-edina ala n'ihi na mgbe ị na-eme nfuli nkwonkwo ụkwụ, mgbe ị na-edina ala, ọ bụghị naanị na ọ na-agbanye ihe niile n'ime sistemụ gị, mana ebulikwala gị elu, yabụ na-alaghachi n'ime sistemụ gị. Kwesighi ime ya dina, ịnọdụ ala, ịnwere ike ime ya n'oche.
Yabụ ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ụbọchị niile, ị nwekwara ike ịme nfuli nkwonkwo ụkwụ ndị a kwa. mana m na-ahụ mgbe niile na ikiri ụkwụ ahụ bụ n'efu. Ya mere, mgbe ọ bụ na ewepụghị ndị a nkwonkwo ụkwụ nfuli na-esiri ike ime, ma mgbe ị nwetara ya anya na nsọtụ i nwere ike n'ezie imipu a nta ọzọ.
Yabụ, pịa ala ruo ókè ị nwere ike wee gbagote ruo etu i nwere ike. Ọ dị mfe. Nfuli nkwonkwo ụkwụ bụ ọkacha mmasị m, ikekwe maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmerụ ahụ ọ bụla ma ọ bụ ọzịza.
Anwụrụ nfuli bụ ụzọ na-amalite na-aga. na ị nwere ike ime ọtụtụ dị ka ị chọrọ. Ha maara na ị nwere ike ime omenala iri na atọ maka iri, mana m bụ, ọ bụrụ na ị mee ihe ndị a, ị ga-achọ ime ha ụbọchị niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ ihe mgbu na nwa ehi gị That na-arụ ọrụ imipu ụkwụ na-arụ ọrụ dị ka mgbapụta eke na mgbapụta mmiri mmiri azụ gị ụkwụ. ọ bụ ya mere o ji dị mkpa n’ezie.
O yighị ka ọ na-eme ọtụtụ ihe, mana site na ime ka akwara nwa ehi ahụ rụọ ọrụ, ọ na-agbapụta mmiri mmiri ahụ n'ime ahụ gị nke mere na nke a dị ezigbo mkpa. na mgbe ahụ mmega ikpeazụ ga-dị nnọọ mfe ogologo ụkwụ bulie. Na agbatị ụkwụ kwụ ọtọ, ị na-adọpụta mkpịsị ụkwụ gị iji ụda ụkwụ gị, ịchọrọ idebe ụkwụ gị ka o kwere mee.
Ọ na-amasị m ịkwado onye nke ọzọ naanị n'ihi na ọ na-ewe iwe na azụ gị yana ọ na-enye gị ebumnuche n'ihi na ịchọrọ ịwelite ụkwụ gị dịka otu ọkwa dị n'akụkụ nke ọzọ. Nwere ike ịga obere elu, mana ị chọghị ịbịa ebe a n'ihi na ị naghị azụzi akwara ndị ahụ ọzọ, anyị na-azụkwa akwara ndị ahụ na-agbapụta mmiri ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, m na-ebulikwa ụkwụ m, yabụ, mgbatị ahụ a bụ ụzọ dị mma iji mee ka akwara niile ahụ rụọ ọrụ iji nweta mmiri, ihe mgbu, na ọzịza ahụ n'ụkwụ, na iji wusie ha ike n'ozuzu.
Yabụ ị nwere ike ịmalite site na iri n'ime ndị a ma ọ bụrụ na nke ahụ adị mfe, ụzọ abụọ nke iri, atọ ụzọ iri, ụzọ abụọ iri na ise. Mgbe ị kụrụ 20-25 ma ọ dị mfe, ịnwere ike itinye obere nkwonkwo ụkwụ ụkwụ n'akụkụ nkwonkwo ụkwụ gị wee malite ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ otu sọks Jomi compression sọks, pịa njikọ dị n'elu. echefukwala ịdenye aha ebe a. ma cheta, dị njikere, nwee anụrị ma nwee olile anya na ị ga-aka mma n’oge adịghị anya.
Gini mere ụkwụ m jiri egbu mgbu n’elu akwa?
Mgbu gịụkwụna ụkwụ nan'abalị, ma ọ bụ mgbe ị na-agbalịhie ụra,bumgbe mgbe, ihe mgbaàmà nke ọrịa akwara ozi (PAD). Ọrịa akwara dị n'akụkụụkwụmgbunwere ikeime ebe ọ bụla na gịụkwụ, ma ebe ndị a na-ahụkarị ihe mgbudịna akwara gịnwa ehi, ukwu ma obu ukwu.Mar 29 2018
Legskwụ na-egbu mgbu bụ ihe mgbaàmà nke Covid 19?
Ndị mmadụ na-eji ngwa ahụ ekwuola na ha nwere ahụ ikemgbunaihe mgbu, karịsịa n'ubu ha ma ọ bụụkwụ.COVIDakwara metụtaraihe mgbunwere ike site na ịdị nwayọ nwayọ ruo na-agwụ ike, ọkachasị mgbe ha rutere n'akụkụ ike ọgwụgwụ.03.29.2021
Kedu ihe kachasị mma maka ụkwụ mgbu?
Zuru ike gịụkwụka o kwere mee, ma bulie nke gịụkwụna ohiri isi. Were ihe mgbochi ihe mgbu, dị ka aspirin ma ọ bụ ibuprofen, iji nyere aka belata ahụ erughị ala dị kaụkwụgwọọ. Yiri sọks sọks ma ọ bụ sọks nwere nkwado.
Kedu ihe mgbu na-egbusi?
Dulla na-ejikarị ihe mgbu kọwaa ihe mgbu na-adịghị ala ala ma ọ bụ nke na-adịghị ala ala. Nke a bụ mirimgbuchere na mpaghara, mana ọ naghị egbochi gị ịme ihe kwa ụbọchị. Ihe Nlereanya nkedullmgbu nwere ike ịbụ: ntakịrị isi ọwụwa. akwara mgbu.
Gịnị ka ịkpụkọ ụkwụ na-adị?
I nwere ike mgbe-enwe mmetụtautịp iyịpuwen'imeụkwụ. Mgbaàmà mbụ nke akwara thrombosis miri emi gụnyere ọzịza na tightness naụkwụ. Nwere ike ịnwe nsogbu na-adịgide adịgide,dị ka mmetụtan'imeụkwụ. I nwekwara ike inwe ihe mgbu ma ọ bụ ịdị nro mgbe ị na-eguzo ma ọ bụ na-eje ije.03.03.2015
Gini mere ụkwụ m ji na-akụ m aghara aghara?
Ọbara mgbali elu / erughị eru
A na - eme ka ọbara anyị laghachi na obi anyị site na obi anyị na - agbapụta na site na anyịụkwụna akwara ụkwụ ka anyị na-eje ma na-emegharị nkwonkwo ụkwụ anyị. na a na-amanye ọbara n'ime anụ ahụ nke akpụkpọ ahụ anyị na-eme ka ọ zaa. Nke a nwere ike ime ka nke anyịụkwụike gwụrụ,Na-egbu nrina-egbu mgbu.15bọchị 15 2021
Akpịrị ịkpọ nkụ nwere ike ịkpata mgbu ụkwụ?
Akpịrị ịkpọ nkụbụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtịna-akpatankemkpara ụkwụ. Crakpukpọ mgbochi bụ mkpịsị na-enweghị aka nke aakwara. Mmiri mmiri dị gị n’ahụ na-eme ka uru ahụ gị ghara izu ike, ma — mgbe akwara ndị ahụ mereakpịrị ịkpọ nkụ—Ha na-ewe ha iwe ma na-adị mfe mkpagide.Sep 18 2018
Kedu ihe ọ pụtara mgbe ụkwụ gị na-egbu mgbu n’enweghị ihe kpatara ya?
Rofụ ụfụ ụkwụ, akwara siri ike, ihe mgbu, ma ọ bụ ịkụda otu ụkwụ bụ ụdị mgbu niile metụtara ụkwụ mgbu. N'ezie, ụkwụ gị adịghị enwe ọnya na-enweghị ihe kpatara ya. Mgbu na-abụkarị ihe mgbaàmà na ihe ezighi ezi.
Kedu ihe na-akpata mgbu ụkwụ dị ka Mayo Clinic?
Site na ndị ọrụ ụlọ ọgwụ Mayo. Imirikiti ihe mgbu ụkwụ na-apụta site na eyi na akwa, ị overụbiga mmanya ókè, ma ọ bụ mmerụ ahụ na nkwonkwo ma ọ bụ ọkpụkpụ ma ọ bụ na akwara, akwara, akwara ma ọ bụ anụ ndị ọzọ dị nro. Typesfọdụ ụdị mgbu ụkwụ nwere ike ịmalite na nsogbu dị na ọkpụkpụ azụ gị. Painkwụ ụfụ nwekwara ike ibute site na mkpụkọ ọbara, varicose veins ma ọ bụ mgbasa na-adịghị mma. Fọdụ ihe na-akpatakarị mgbu ụkwụ gụnyere:
Kedu ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke mgbu ụkwụ?
Dabere na ihe kpatara mgbu, mgbaàmà ndị ọzọ, dị ka. adịghị ike, ọnụ ọgụgụ, ụfụ, cramps, mgbu, ma ọ bụ. ihe na-emetụ gị n'ahụ, nwere ike iso mgbu ụkwụ.